उजाड जीवन न सुन्दर हुन्छ न डाँडाकाँडा, भरीभराउ सुन्दरता पक्कै पनि डाँडाकाँडामा हरियाली जीवनमा खुशियालीले दिन्छ । हामी हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामी त्यसै पनि प्राकृतिक सुन्दरताले धनी छौं, त्यो वातावरण होस् या मानिस । हाम्रा चाडपर्वहरु हाम्रो संस्कृति अनि हाम्रा जीवनशैली आफैमा सुन्दर छन् । हामीलाई के हिउँद के बर्खा खासै फरक पर्दैन । हरेक समय हाम्रो सुन्दरता झल्की नै रहन्छ । विशेषतः अब सुरु भइरहेको बर्षा अनि चाडपर्वको माहोल, अहा….! कहिले पनि नसकियोस् झै लाग्छ ।
हरियाली वातावरण हाम्रो जीवनको महत्वपूणर् अङ्ग हो । यसलाई जोगाउनु अनि बिकास गर्नु हाम्रो दायित्व हो । यहाँ मैले उठान् गर्न खोजेको बिषय पनि आज रुख विरुवा डाँडाकाँडाबाट मानिसमा सरेको हरियो बिकृित हो । धेरैलाई नराम्रो लाग्ला तर यथार्थ के हो भने आज आएर हामी हरियाली वातावरणमा काम र चिज तथा लगाउने लुगाहरुमा बढी खोज्ने गरेका छौं । खासगरी साउन महिना सुरु भएदेखि हाम्रा घर आगनमा लथालिङ्ग हरिया चुरा र वस्त्रले कब्जा जमाएर यस्तो देखाइन्छ कि हरिया चुरा बिना साउन जाँदैन कि झै गरिन्छ ।
खासगरी नेपालसँगै भारतमा पनि यो ठूलो प्रचलन बनिसकेको छ । तर, धार्मिक तथा बैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट कारण खोज्दा समेत कुनै तार्किक अर्थ भेटिएको देखिदैन । काँचका चुरा लगाउँदा हाम्रो शरीरको रक्तसञ्चारलाई यसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा नकार्न त सकिन्न तर हरियो लगाउन साउन नै कुर्नुपर्छ भन्ने पक्कै हैन ।
उसो त चुरा पोते सारी हामी नारीहरु को सिङ्गारमा पर्दछ र हामीले लगाउने नै गरेका छौं । यसमा कारण र बहसको कुनै गुञ्जायस रहँदैन । तर, अहिले आएर हरियो चुरा धेरै प्रचलनमा आयो यसको खास कारण व्यापारीलाई फाइदा मात्र देखिन्छ र अचम्मको कुरा यो व्यापार हाम्रो देशले गर्दैन । किनकी यी चुरा आयात हुने भारतको बनारस या हैदरावादबाट हो । हामी नेपाली नारीहरुलाई देखासिकि खुब मन पर्छ तर यसले कहाँ कसरी केमा प्रभाव पारेको हुन्छ मनन् गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
हाम्री आमा, हजुरआमाहरुले हरिया चुराको चटक बिना नै हामीलाई यति सुन्दर जीवन जिउन सिकाउनु भयो । हरियो चुरा लगाई फेसन देखाई गरेको पूजाको के अर्थ हुन्छ र ? साच्चै धर्म गर्नु नै छ भने चुरा बेचौं अनि जाउ साउनले बगाएर घरवारविहीन पीडितहरुको उद्धार र सहयोगमा हात बढाउ, तब मात्र धर्म भएको मानिन्छ ।
बेलपत्ता रुखै मुडुलो पारेर हरिया चुरा सारी लगाएर पूजा गर्नु को अर्थ के ? फेसबुकको भित्ता रङ्ग्याउनकै लागि धर्मलाई बदनाम गर्ने गरी बिकृति ल्याउनुको के अर्थ ? यसरी भनिरहँदा म पूणर् खिलापमा छु र सबै गलत हो भन्ने पनि होइन । तर, यसरी आवश्यकता भन्दा बढी उम्लिनु पक्कै पनि राम्रो होइन । सुन्दा सामान्य लाग्ला तर प्राकृतिक हरियालीको ख्याल नगरी चुरामा हरियोपन खोज्नु मुर्खता बाहेक केही होइन ।